Hatsarao ny fisian'ny SERP Google anao amin'ireto snippets manan-karena ireto | Martech Zone
Hatsarao ny fisian'ny SERP Google anao amin'ireto snippets manan-karena ireto
Talata, Janoary 26, 2021 Talata, Janoary 26, 2021 Douglas Karr
Mandany fotoana iray taonina ny orinasa raha mijery amin'ny laharam-pikarohana izy ireo ary mampivelatra atiny sy tranonkala mahatalanjona izay mitondra fiovam-po. Saingy ny paikady lehibe iray matetika tsy tratrarina dia ny fomba ahafahan'izy ireo manatsara ny fidirany a pejy valin'ny motera fikarohana. Na laharana ianao na tsia dia tsy maninona raha ny mpampiasa fikarohana no voatery manindry ny marina.
Na dia lohateny lehibe, famaritana meta ary permalink aza dia afaka manatsara ireo vintana ireo… ny fampidirana sombin-teny manan-karena amin'ny tranokalanao dia mety hampiakatra ny taha-tsindry. Alao an-tsaina, ohatra, ianao mitady vokatra manokana amin'ny Internet ary misy ny lisitry ny fidirana. Raha marika antsasa-midina nidina ny pejy dia misy sary, vidiny, misy, na tsikera… mety ho voatery hitery bebe kokoa ianao hiditra io fidirana io fa tsy ireo etsy ambony.
Ny SERP dia pejin-tsambo misy fikasana hikaroka na hividy. Ny ampahany lehibe amin'ny paikadim-pitadiavana biolojika dia tokony hampihatra sy hanatsara ny fahitana anao amin'ireo pejy valin'ny fikarohana ireo… ary snippets manankarena no fitaovana anaovanao izany.
Azonao atao ny manoratra Schema.org amin'ny fomba fampiharana tanteraka ny sombin-karena - izany no fenitra ampiasain'i Google. Misy fomba telo hampidirana an'ity data ity ao anatin'ny tranokalanao, araka ny Google:
Microdata - Famaritana HTML an'ny vondrom-piarahamonina misokatra ampiasaina hametrahana angona voarafitra ao anaty atiny HTML. Tahaka ny RDFa, dia mampiasa toetra tag HTML mba hanomezana anarana ireo fananana tianao haseho ho tahiry voarindra. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny vatan'ny pejy, saingy azo ampiasaina amin'ny lohany.
RDFa - Fanitarana HTML5 izay manohana ny angon-drakitra mifamatotra amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo toetra tag HTML izay mifanaraka amin'ny atin'ny hitan'ny mpampiasa izay tianao faritana ho an'ny motera fikarohana. RDFa dia matetika ampiasaina amin'ny fizarana loha sy vatana amin'ny pejy HTML.
Andramo ireo snippets manan-karena anao
Marketing Mojo dia nanome an'ity lisitr'ireo Google Rich Snippets ity tao amin'ny infographic, Fomba 11 hampiasana snippets Google Rich hanatsarana ny valin'ny fikarohanao. Ity misy lisitr'ireo sombin-javatra manan-karena:
hevitra - Azo ampiasaina hanehoana hevitra sy isa ho an'ny vokatra na orinasa amin'ny valin'ny karoka.
Recipes - azo ampiasaina hanehoana antsipiriany bebe kokoa momba ny fomba fahandro, toy ny fangaro, ny fotoana fandrahoan-tsakafo, na ny kaloria aza.
People - ny fampahalalana toy ny toerana, ny titre asa, ary ny orinasa dia azo aseho amin'ny valin'ny fikarohana ho an'ny olona iray - ao anatin'izany ny anaram-bosotra, ny sary ary ny fifandraisana eo amin'ny fiaraha-monina.
Business - antsipiriany momba ny orinasa na fikambanana toy ny toerana, nomeraon-telefaona, na koa ny sary famantarana azy ireo.
Products - Ny pejy vokatra dia azo amidy mba hampisehoana fampahalalana toy ny vidiny, tolotra, naoty na vokatra, ary ny fisian'izany.
Events - hetsika an-tserasera, kaonseritra, fety, kaonferansa dia afaka manome antsipiriany bebe kokoa ao anatin'izany ny daty, toerana, sary, ary ny vidin'ny tapakila.
Music - fampahalalana momba ny mpanakanto ao anatin'izany ny sarin'izy ireo, rakikira, ary na dia rakitra audio an-tsofina aza mihaino.
Video - azo aseho ny bokotra ankavanan'ny sary sy ny lalao, mampitombo ny tahan'ny click-through 41%.
Apps - fampidinana sy fampahalalana fanampiny momba ny sehatra rindrambaiko sy ny rindranasa finday.
Breadcrumbs - manomeza ambaratongam-pahefana ao amin'ny tranonkalanao mba hahafahan'ny mpampiasa motera fikarohana afaka mifanerasera amin'ny upstream amin'ny lahatsoratra manokana amin'ny sokajy na sokajy.
Raha tena te-hijery fijerena lalina ireo sombin-javatra manan-karena ianao - vakio Sombiny Google 28 manankarena tokony ho fantatrao [guide + infographic]. Frantisek Vrab dia nanoratra torolàlana feno pitsopitsony amin'ny famaritana kaody, topi-maso ary fampahalalana hafa manampy.
Snippets Google Rich 28 tokony ho fantatrao
Sombin-javatra iray efa lany andro dia ny tag mpanoratra. Mampalahelo (amin'ny hevitro) ny nanesoran'i Google an'io satria mino aho fa nanome fahitana tsara kokoa ny olona momba ireo lahatsoratra nosoratany nanerana ny tranonkala.
Tags: Sary torohayjson-ldmicrodataPeoplerdfahevitrainfografika sombin-javatra manan-karenasnippets manankarenatetikaschema markupserpVideo
Mandefasa mailaka amin'ny alàlan'ny SMTP amin'ny WordPress miaraka amin'ny Google Workspace sy ny fanamarinana roa-factor
Fitaovana fikarohana, fanadihadiana, fanaraha-maso ary fitantanana Hashtag